Izinto ezilukiweyo zekhompyuter zenzelwe iiNkampani → Ihowuliseyili • Umvelisi • Umhambisi weP & M
Kutheni kufanelekile ukusebenza nathi?
Siyinkampani egxile kwintengiso kunye nokusasazwa kwentengiso kunye nempahla yokunxiba. Asiboneleli ukumakisha iimpahla kuphela, kodwa neendwangu zisebenzisa indlela isambatho sekhompyuter kunye nokuprintwa kwesikrini.
Bhalisa inkampani yakho namhlanje kwaye ufumane isaphulelo esinomtsalane! >>
Abasebenzi bethu abaqeqeshiweyo abaneminyaka emininzi yamava baya kukuvuyela ukunceda kunye neengcebiso kuyilo kunye nokukhethwa kwendlela efanelekileyo yokumakisha. Sinamava abanzi ngokuthunga, ukucheba kunye nokuyila iiarhente zentengiso kunye neempawu ezidumileyo.
Ukusukela ngo-2003, besibonelela ngeenkonzo zokuthunga, ukusika, uku-ayina kunye neelebheli. Sinegumbi lethu lokuthunga kunye nepaki yomatshini yokuhombisa. Sineentlobo ngeentlobo zeemveliso- ngaphezulu kwe-6000 yeemveliso, iimpahla zomsebenzi kunye neempahla zentengiso ezivela kubavelisi abaziwayo ngamaxabiso anomtsalane kakhulu. Ungazithenga zombini iinkonzo zokunxiba kunye neelebheli (nceda unxibelelane nathi kwangaphambili ukuze ufumane isicatshulwa esenzelwe wena) kwiwebhusayithi yethu www.pm.com.pl okanye kwivenkile yethu kwiAllegro "PRODUCER-BHP".
Igumbi lethu lokuthunga liyaqinisekisa ukuba iimveliso esizivelisayo zenziwe ngeyona nto iphakamileyo yelaphu kunye nezinto ezifanelekileyo zokusebenza kunye nobuchwephesha bokudaya obuphambili kunye nokugqibezela. Siyakwazi ukudibana nezona kontraktha zifuna kakhulu ngokusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo esinazo.
Siyaguquguquka-sisabela ngokukhawuleza kwiimfuno zabathengi-kwimveliso nakwimicimbi esesikweni. Sinikezela ngenkonzo yokuhombisa kunye nokushicilela kwesikrini zombini kwiimveliso ezithengwe kwivenkile yethu kwaye zisiwe ngumthengi. Ukongeza, ngokubhalisa kwiwebhusayithi yethu, xa uthenga, ungafumana isaphulelo esongezelelweyo kwi-odolo yesibini.
Siza kwi-oda nganye nganye, sijonga ukuphunyezwa kwayo kwinqanaba ngalinye. Sakha ukuthembeka kwethu kunxibelelwano oluvulekileyo kunye nabathengi kunye nokhathalelo olululo.
Imfakamfele yekhompyuter-eyomntu owaziwayo
Ukuveliswa kweentlobo ngeengubo - kubandakanya impahla yokunxiba - yinxalenye yokubonelela. Njengenxalenye yentsebenziswano, abathengi bethu bafumana ithuba lokusebenzisa iinkonzo ezongezelelweyo. Sikwasebenza ngokungathi yindibano yocweyo yeembalasane, sesinye sezizathu zethu ezikhulu zokuba neqhayiya.
Ukuhanjiswa kweekhompyuter yeyona ntlobo esemagqabini, ihle kwaye ihlala ixesha elide lelebheli yokunxiba. Sisebenzisa izixhobo ezikhethekileyo zobugcisa, siyakwazi ukwenza nayiphi na indlela, nkqu neyona patheni ichanekileyo kulo naluphi na uhlobo kwiimpahla zalo naluphi na ubungakanani. Senza izicelo zokufeketha kwiintlobo ezininzi zeempahla (ihempe, ihempe, i-t-shirts, iimpahla zomsebenzi, iaprons, iitawuli, isikhafu. Asiphelelanga kuhlobo lweengubo nokuba- umzi-mveliso wethu unegumbi lokuthunga kunye nendawo yokusika, ngoko ke sinolawulo olupheleleyo kumgangatho wento asilungiselela yona. Amathuba anikezelwa ngumasifundisane wecomputer wekhompyuter uluncedo olukhulu kwinkampani esebenza kwimarike yempahla yasePoland yempahla yokusebenzela kunye nentengiso.
Babesithemba, phakathi kwabanye:
-Umzuzu om-1 kaJacobs
- Kumho Bridgestone
- Udumo lwesitokhwe
kunye nezinye ezininzi. Okungakumbi ukubona kwelethu Ivenkile. Iiprojekthi zethu zangaphambili zibonisa ukuba ngaphandle kweprojekthi, siyakwazi ukwenza ii-odolo ngokuthembekileyo nangexesha.
Ukuprinta kwescreen-ukumakisha kwentengiso
Yenye yeendlela ezikhethwe rhoqo zokumakisha, esikwanakho nokuzinikezela. Le nkonzo ayonakalisi kuphela kwaye inikezela ngomgangatho ogqwesileyo, kodwa ikwabonisa ngokuchanekileyo iphalethi yombala yoyilo ngalunye lwegraphic. Ngenxa yobuchwepheshe bayo obuphambili kunye nokuchaneka, siyakwazi ukubonelela abathengi bethu ngomgangatho ofanelekileyo onokwenzeka, zombini xa kufikwa kwizambatho ngokwabo, kunye ne-logo eboshwe kubo, imibhalo ebhaliweyo eprintiweyo okanye imizobo. Ngenxa yokuhambelana kweenkonzo zethu, sinokulawula kuyo yonke inkqubo yokwenza iprojekthi egqityiweyo.
Ukuhanjiswa ngokukhawuleza yinjongo yethu
Sithumela iiodolo kubathengi kulo lonke elasePoland, nakwamanye amazwe. Sithumela iimpahla ikakhulu nge-DPD yekhuriya. Ngee-odolo ezinkulu, kwisicelo somthengi, siququzelela ukuthutha ukuya kwindawo yokugcina izinto. Siyakwazi ukusebenzisana nee-odolo eziqhelekileyo ngamaxabiso anomdla kakhulu. Kukwakhona nokuqokelelwa komntu kwikomkhulu lethu eRawa Mazowiecka.